Afrika oo yeelatay baasaboor cusub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldAfrika oo yeelatay baasaboor cusub
Madaxweynayaasha Rwanda iyo Chad oo noqday labadii qof ee ugu horeeyay oo la siiyo baasaboorka. Sawirka: Xinhua.
Kigali-(Puntland Mirror) Afrika ayaa maanta bilowday baasaboor cusub oo ka dhaxeeya qaarada oo dhan, kaasoo la siin doono dhamaan dadka u dhashay qaarada Afrika marka uu si rasmi ah u dhaqan galo.
Baasaboorka oo ay maamulayso Midowga Afrika ayaa waxaa lagu bilaabay siintiisa Madaxweynaha dalka Chad ahna madaxa Midowga Afrika Idris Debi iyo Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame oo martigelinaya shirka.
Waxaa la filayaa in loo wada qaybin doono dhamaan madaxda Afrikaanka ah oo shirka ka qayb galaya.
Midowga Afrika ayaa sheegay ujeedada ugu weyn ee baasaboorka loo sameeyay inuu yahay fududaynta dhaqdhaqaaqa dadka, badeecooyinka iyo adeegyada kale ee qaarada.
Shir madaxeedka 27-aad ee hoggaamiyaasha Afrika ayaa maanta si rasmiya uga furmay caasimada Rwanda ee Kigali.
August 5, 2017 Madaxweyne Paul Kagame oo ku guuleystay doorashada madaxtinimada Rwanda